Toetra 8 an'ny olona tsy miankina - Blog
Toetra 8 an'ny olona tsy miankina
Ny foto-kevitry ny tsiambaratelo ao amin'ny fifandraisantsika - na tokony ho 'mifamatotra loatra' - dia mety ho lany andro izao tontolo izao.
Ny firoboroboan'ny fahalainantsika ara-kolontsaina amin'ny fampisehoana ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika manomboka amin'ny mangiran-dratsy ka mandra-paharivan'ny andro ary amin'ny lafiny maro amin'ny sehatra media sosialy samihafa dia mazava ho azy fa fanoherana ny tsiambaratelo.
Saingy, noho izany rehetra izany, maro ireo izay misafidy ny hamaritra ny tenany ho olona ‘tsy miankina’.
Ny olona tsy miankina iray, araka ny antenainao, dia aleony mitazona ny zavatra ambany ambany ary tsy hitany fa mora ny manokatra olon-kafa.
Ny ankamaroan'ny olona izay toerana misy anao ny fiainana manokana dia manana fironana amin'ny fidirana an-tsehatra izay tsy azo faritana ho lolo lolo ara-tsosialy ary amin'ny ankapobeny tsy manome be momba ny fisian'izy ireo isan'andro.
Tsy natao ho azy ireo ny fandefasana ny fiolahana amin'ny fiainany amin'ny media sosialy. Ny tanjon'ny olona tsy miankina dia ny hijanona eo ambanin'ny radara, amin'ny fahafantarana fa, raha vao miditra amin'ny orbit social ianao dia mety ho sarotra ny mihemotra mankany amin'ny fiainana tsy fantatra anarana izay ahasambatra indrindra azy ireo.
Ny olona tsy miankina dia mety ho diso fandray.
Hatreto, tena tsara, ho an'ilay olona misafidy ny hitandrina ny fiainany manokana.
Ny zava-misy mampalahelo dia ireo olona hafa be mpahalala kokoa - eny, ireo izay mihevitra ny tenany ho ‘ara-dalàna’ - dia mety manana olana amin'io safidy io.
Ny fihetsika mahazatra miafina, izay toa tsy voajanahary loatra amin'ny hafa, dia mety hiteraka tsy fifankahazoan-kevitra ary ho diso hevitra noho ny fieboeboana na ny fihevitry ny lehilahy mihitsy aza.
Ny tsy fahazotoana manaparitaka ny tsaramaso momba ny tantaram-piainanao, na ny fandavana ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-monina aminao dia mety hiteraka fieritreretana fa misy zavatra miafina, ka izany dia miteraka ahiahy sy tsy fahatokisana.
Ity dia fanjaitra manankarena ho an'ny mpanoratra tantara foronina nandritra ny am-polony taona Boo Radley tao Harper Lee's Mamono Mockingbird dia tranga mahazatra, raha somary tafahoatra.
Noho izany, tsy mora ny ho olona tsy miankina iray izay ny fenitry ny kolontsaina no mifanohitra amin'ny diametric.
milomano eny amoron-dranomasina 2000
Manana zavatra hafenina ve ny olona tsy miankina?
Na dia mety ho izany aza ny fiheverana misimisy kokoa dia mahalana no izy.
Ny olona misafidy ny hitazona ny fiainany manokana dia mety toa tsy manakaiky sy tsy tia ady amin'ny hafa, saingy ny antony ao ambadiky ny safidiny hijanona eo ambanin'ny radara dia tsy azo inoana satria mitady hanafina zavatra izy ireo.
Azo inoana fa manana olana amin'ny fifampatokisana izy ireo, matetika noho ny famoizam-po na famadihana teo aloha manirery voajanahary heverin'izy ireo ho toy ny toeram-pialofana milamina ny tranony ary tsapan'izy ireo fa manan-jo hankafy ny fisiany mangina izy ireo.
Ary tsy misy maharatsy izany antony izany rehetra izany.
Saingy, ao an-tsaina ao amin'ireo teboka ireo, angamba azo atao ny milaza fa ny olona tsy miankina dia manana zavatra hafenina rahateo: ny azy ireo TOETRA .
Ary izany dia satria ny fandriam-pahaleman'izy ireo dia fahafoizan-tena ary tsapan'izy ireo fa olona vitsivitsy ihany no mendrika atokisana. Ny tena tenan'izy ireo dia miery tsara miafina amin'ireo rehetra ireo afa-tsy ireo olona vitsy atokisana.
Nanova an'izao tontolo izao ny olona tsy miankina.
Mahaliana fa ny sasany amin'ireo mpandinika faran'izay lehibe indrindra eran-tany, izay nanao fandraisana anjara lehibe tamin'ny fisian'ny olombelona, ​​dia olona tsy miankina.
Tranga iray i Albert Einstein, izay notononina nilaza hoe: 'Ny tsy fitovizan'ny fiainana irery sy ny fiainana mangina dia mandrisika ny saina mamorona.'
Toy izany koa, Sir genius fizika, Sir Isaac Newton, dia nalaza noho izy niaro fatratra ny fiainany manokana, na dia iray amin'ireo mpahay siansa malaza indrindra tamin'ny fotoana rehetra aza izy. Ny fialan-tsasatra amin'ny limelight dia nanome azy ny toerana sy fotoana ilainy hifantohana amin'ny fikarohana nataony.
Sarotra rahateo ny mamokatra rehefa voahodidin'ny antsoantso tsy misy fetra ianao, izay noforonin'ny olombelona manao ny asany.
antony tiako ny reniko
Ny fanidiana ny hubbub, ary ny fananana fotoana handinihana sy hieritreretana tsy misy fanelingelenana, angamba no nanampy ireo mpandinika lalina indrindra an'izao tontolo izao hanova an'izao tontolo izao.
Angamba izany manome ny olon-tsy fantatra ny sisiny?
8 Toetra mampiavaka ny olona tsy miankina
Ka raha olona mihevitra ny tenany ho manokana ianao, inona avy ireo toetra anananao?
1. Halavirinao ny fahazavana.
Ny tena foto-kevitry ny fifantohana dia ny anatema ho an'ny olona manana toetra manokana.
Mety ho mifanohitra amin'ny fomban'ny ankehitriny izany, izay anananan'ny tsirairay mafy ny fahombiazany amin'ny tambajotra sosialy sy fizarana ny minisien'ny fisiany amin'izao tontolo izao, mitady ny fiheverana sy ny fankatoavana ho endrika fanamarinan-tena.
Saingy, raha olon-tsotra ianao, dia tsy sarotra ny milomano manoloana ny onjan'ny be loatra, miaraka amin'ny tanjona hampihena ny persona ho an'ny daholobe. Fihetsika voajanahary io ho an'ny olona voatokana ary aleony misy fikajiana.
Any ny hafa miroborobo amin'ny fiderana ny mpiara-miasa, mandray ‘attaboys’ amin'ny avonavona lehibe ary eo afovoan'ny fihobiana, dia olona tsy miankina no mihemotra amin'ny fandokafan-bahoaka toy izany.
Ho anao dia ampy ny fahalalana fa nahavita tsara ianao ary nekena ny ezaka nataonao, nefa tsy mahatsapa ho mila miantsoantso ny amin'ny fahombiazanao avy eny an-tampontrano na mba hahazo fankatoavana marobe.
2. Mieritreritra ianao alohan'ny hitenenanao.
Ny sasany mety mihevitra fa ny hany fomba hananana 'fanatrehana' amin'ny tontolo mifaninana, sy hanamarinana ny fisiany manokana, dia ny fizarana ny eritreritra mifoha rehetra, mandrotsaka loharanom-baovao momba azy ireo, na misy ifandraisany izany na tsia, fotsiny henoina.
Ny olona tsy miankina toa anao kosa dia mandanja tsara ny teniny ary tsy manome na inona na inona afa-tsy ny antsipiriany fototra indrindra.
Rehefa apetraka ny fifampitokisana vao hanambara bebe kokoa momba ny fiainanao manokana ianao, ary avy eo amin'ny olom-bitsy vitsivitsy.
3. Mamboly persona mankaleo ianao.
Niasa ianao fa ny fomba tsara indrindra hanakatonana ny fahalianan'ny olona amin'ny anao manokana, ary noho izany manokana, ny fiainana dia ny fanaovana sary maloka toa anao ka mankaleo azy fotsiny.
Raha ny fanontaniany manelingelina momba ny fiainanao amin'ny ankapobeny, ary indrindra koa ny momba ny antsipiriany manokana, dia hihaona amin'ny valinteny monosyllabic na tsy mazava, tsy ho ela izy ireo dia hijanona tsy hanontany intsony satria tsy mendrika ny fotoanany ianao.
Ilay tetika tena mitovy amin'izany dia nampiasaina hahomby tokoa amin'ireo olo-malaza manisy lanja ny fiainany manokana: andiany vitsivitsy amin'ny 'tsy misy resaka' na 'Tsy fantatro' no manidy ny fametraham-panontaniana amin'ny fotoana fohy.
Na dia mety ho lavitra mankaleo aza ny fiainanao, ny zava-misy dia raha tsy mahazo ny vaovao tadiaviny ny fianakavianao sy ny namanao dia hijanona tsy ho ela izy ireo amin'ny fametrahana fanontaniana ary hamela anao hiroso amin'ny fiainanao manokana tianao.
4. olona vitsivitsy fotsiny no atokisanao.
Tsy misy lehilahy (na vehivavy) nosy, hoy ny fomba fiteny taloha, ary na dia ny olona tsy miankina aza dia mazàna dia vitsy ny olona azo atokisana izay atokisany tanteraka.
Tsy tonga mora io fahatokisana io, satria matetika kokoa noho ireo tranga famadihana taloha izay nahatonga anao hiambina akaiky ny fampahalalana manokana momba ny fiainanao manokana.
fomba tsara indrindra hiatrehana ny mpifoka rongony
5. Halaviro ny famaliana fanontaniana momba ny prying.
Raha ny marina dia novanao ho kanto ity. Tena mahay ve ianao amin'ny familiana ireo fanontaniana manelingelina, ka ilay olona miresaka aminao dia tsy mahatsikaritra akory fa tsy nahavita namaly ny fangatahan'izy ireo tamin'ny fomba feno.
Fantatrao amin'ny traikefa mangidy fa ny fanambarana be loatra momba ny fiainanao matetika dia miafara amin'ny fitsikeran'ny olona ny fanapahan-kevitrao.
Mbola ratsy kokoa aza, na dia nangataka manokana aza ny antsipirihany hitazomana tsiambaratelo ianao, dia fantatrao fa mety tsara ny hizaran'ity olona ity ny tsiambaratelonao amin'ny hafa.
Nianaranao fa tsara kokoa ny mitazona ny torohevitanao manokana mba tsy ho diso fanantenana na ho kivy ianao olona tsy atokisana .
6. Milamina aminao ny tsiambaratelon'ny olona.
Tsy vitan'ny hoe manam-pahaizana amin'ny fitazonana ny tsiambarateloo anatiny indrindra ianao, fa mampiasa an'io fahaizana efa voahaja tsara io ihany koa mba hitazomana ny mombamomba anao momba ny hafa.
Mahatonga anao ho namana mahatoky sy atokisana izany satria tsy hamadika ny fitokisan'ny olona mihitsy ianao na hanomboka hifosa momba azy ireo ao ivohony.
Manaja ny tsiambaratelon'ny olon-kafa ianao ary valiny dia manantena ianao fa hitondra ny anao amin'ny fiheverana mitovy.
7. Mahery ny fetranao manokana.
Misy zavatra vitsivitsy izay mahatonga anao hahatsapa ho marefo kokoa noho ny fananan'ny olona mitsikitsiky ny fiainanao.
Rehefa mahatsapa fa iharan'ny fanafihana toy izao ianao, dia hiezaka mafy hiaro ny fari-taninao manokana.
Ry olona Nosy ary ny fanontaniana manelingelina dia mety tsy zakanareo fa, amin'ny lafiny iray ihany, tsy hiditra amin'ny orinasan'olon-kafa mihitsy koa ianao. Ianao, ambonin'izany rehetra izany, dia mahatakatra ny zon'ny olon-kafa hitazona ny tsiambaratelony.
Manana singa sasany amin'ny fiainanao ianao izay mety maniry ny hizara amin'ny hafa fa betsaka kokoa izay tianao ny mitokana.
Amin'ny fametrahanao ny fetranao manokana toy izao, dia tsy ho voafitaka ianao amin'ny fanomezana torohay bebe kokoa momba anao mihoatra ny noeritreretinao tany am-boalohany, na ho an'ny namana, mpianakavy, mpiara-miasa na olon-kafa nifanena taminao .
Voafehinao ny lohahevitra mahafinaritra anao horesahina ary mahay misafidy tsara ny teny ampiasainao sy ny olona itenenanao ianao.
8. Esory amin'ny media sosialy ny tenanao.
Tsy midika akory izany hoe tsy mampiasa media sosialy mihitsy ianao, fa tsy ho resin'ny valanaretina be loatra.
Ny fanavaozana ny satan'ny tenanao manokana sy ny famoahana selfie an-jatony mampiseho ny fiainanao manontolo amin'ny Insta, Twitter, na Facebook dia tsy natao ho anao.
Izay fisian'ny Internet izay anananao dia mety ho voatazona tsara, hahazoana antoka fa manambara ny kely indrindra momba ny fiainanao manokana ianao.
Raha toa ka mitaky fifaneraserana an-tserasera ny asanao - ary misy vitsivitsy sarobidy izay tsy eto amin'ity tontolo misy ifandraisany nomerika ity - dia mifehy tsara ny zavatra ambaranao momba anao amin'ny antony ilana fahalalana fotsiny ianao. Raharaham-barotra tanteraka izany.
14 Toetra mampiavaka ny olona voatokana
Ahoana ny fomba hiatrehana ny olon'ny Nosy sy ny fanontaniana
Ahoana ny fomba hitondrana olona tsy manaja ny sisin-taninao
Fomba 5 hiarovana ny habakao manokana nefa tsy hanafintohina ny hafa
Antony 14 antony itiavanao ny maha irery anao matetika
Antony 7 Mety hieritreritra ny olona fa hafahafa ianao
famadihana olona tianao
famantarana fa manokatra anao izy
zavatra hatao mandritra ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny sipanao